ဘေဘီလေးတွေကို ရောဂါဆိုးတွေ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပေးမယ့်အရာ - Hello Sayarwon
မိဘတွေက သားသမီးတွေရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်ပါ။ ဘေဘီလေးတွေကို မွေးဖွားလာချိန်ကနေစလို့ ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ချက် မချနိုင်ခင်အထိ ဘေဘီလေးတို့ရဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်ရေး အားလုံးကို မေမေဖေဖေတို့ကပဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာပါ။
ကလေးကို ဘယ်လို အစားအသောက် ပြင်ဆင်ပေးမယ်။ ဘယ်ကိုတော့ ခေါ်သွားမယ်။ ဘယ်ကျောင်းမှာ ထားမယ်ဆိုတာတွေကအစပေါ့။ ဒီလို ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့အထဲမှာ ကြီးကြီးမားမား ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ဘေဘီလေးကို ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးရမလား။ မထိုးပေးရဘူးလားဆိုတာပါ။
ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သတ်လို့ ကောလဟလတွေ၊ သတင်းအချက်အလက်အမှားတွေကြားဖူးထားတတ်ကြသလို ကလေးနာမှာကြောက်တာ၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ဖျားမှာကြောက်တာတွေလည်း ရှိကြတာကိုး။
အဖြေထုတ်ရခက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ကာကွယ်ဆေးကို ဘေဘီလေးကို ထိုးပေးလိုက်ပါလို့ အကောင်းဆုံး အကြံပြုပါရစေ။ ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောရလဲဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ပြောပြပေးမယ်နော်
ကာကွယ်ဆေးက ဘေဘီလေးတို့ အတွက် ဒိုင်းတစ်ခုပါ။
ကာကွယ်ဆေးဆိုတာက ဘေဘီလေးတွေကို အန္တရာယ်များတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ၊ ဘက်တီးရီးယားတွေ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပေးတာပါ။ ကာကွယ်ဆေးက ကမ္ဘာပေါ်က ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ရောဂါတွေကို အပြီးတိုင် ပျောက်ကွယ်သွားအောင် သုတ်သင်ပေးနိုင်တဲ့ ထိရောက်တဲ့ ဆေးဝါးတစ်မျိုးပါ။
ကာကွယ်ဆေးတွေကြောင့်ပဲ ကုသဖို့ ဆေးဝါးမရှိတဲ့ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ၊ ပိုလီယိုရောဂါလိုမျိုး ရောဂါတွေ အန္တရာယ်ကနေ ဘေဘီလေးတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်ပေးနိုင်တာပေါ့။
ကာကွယ်ဆေးကြောင့် ကလေးတွေကို အဆုတ်ရောင်ရောဂါ၊ ဝက်သက်၊ ရေကျောက်၊ ဆုံဆို့နာ၊ တုပ်ကွေး၊ အသည်းရောင် အသားဝါ A ပိုး၊ အသည်းရောင် အသားဝါ B ပိုး၊ ရိုတာဗိုင်းရပ်စ်တို့လိုမျိုး ရောဂါဆိုးတွေ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်တာပါ။
ဒီရောဂါတွေက ကလေးတွေကို အကြောသေတာ၊ အမြင်အာရုံ ဆုံးရှုံးတာ၊ အကြားအာရုံ ထိခိုက်တာ၊ အသက်သေဆုံးတာတွေအထိ ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးတာက ဘေဘီလေးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် ဒိုင်းတစ်ခု ဖန်တီးပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီး မထင်မှတ်ဘဲ ရောဂါပိုးတွေ ဝင်ရောက် ကူးစက်ခံရမှုကနေ ကာကွယ်ပေးလိုက်တာပါ။ မတော်တဆဆိုတဲ့ အခြေအနေကို ရှောင်လွှဲလိုက်တာပေါ့။
ကာကွယ်ဆေးက ဘေဘီလေးကိုဘယ်လို ကာကွယ်ပေးတာလဲ …
ကာကွယ်ဆေးက ဘေဘီလေးရဲ့ ရှိရင်းစွဲ ကိုယ်ခံအားကို လှုံ့ဆော်ပေးတာပါ။ ကာကွယ်ဆေးက ပမာဏနည်းနည်းပဲ ထိုးရပြီး ထိရောက်မှု အားကောင်းပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးက သေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ ဒါမှမဟုတ် အားပျော့သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ် အနည်းငယ်ကို ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ စမ်းသပ်ထားတဲ့ ပရိုတင်းနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ထိရောက်ဘေးကင်းအောင် ထုတ်ထားတဲ့အရာပါ။ ဘေဘီလေးရဲ့ ကိုယ်ခံအားကို ရောဂါပိုးတွေကို တိုက်ထုတ်နိုင်စေဖို့ ကြိုတင် လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ အရာပေါ့။
ဘေဘီလေးရဲ့ ဖွံဖြိုးဆဲ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ထိထိရောက် အားဖြည့်ပေးလို့ ရောဂါတွေ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပေးဖို့ စိတ်ချရတဲ့ ဆေးဝါးတစ်မျိုးပါ။
How immunization works? https://www.sanofi.com/en/your-health/vaccines/how-immunization-works Accessed Date 18 November 2020
CDC. Understanding How Vaccines Work. https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/conversations/downloads/vacsafe-understand-color-office.pdf Accessed Date 18 November 2020
Vaccinate Your Baby for Best Protection https://www.cdc.gov/features/infantimmunization/index.html Accessed Date 18 November 2020
Vaccinations protect and are safe for your children https://www.unicef.org/png/press-releases/vaccinations-protect-and-are-safe-your-children Accessed Date 18 November 2020
How Vaccines Secure Your Child’s Freedom from Disease https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/immunizations/Pages/How-Vaccines-Secure-Childs-Freedom-Disease.aspx Accessed Date 18 November 2020